RØDEမှထုတ်လွှင့်သည့် Podcast ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို! | Martech Zone
RØDEမှထုတ်လွှင့်သည့် Podcast ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို!
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 11, 2018 အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 11, 2018 Douglas Karr
ဤပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်မပါဝင်လိုသောအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ podcasts အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဝယ်ခြင်း၊ အပြည့်အဝရောနှောခြင်းနှင့်စတူဒီယိုတစ်ခုမှကျောပိုးအိတ်ထဲသယ်ဆောင်နိုင်သောကျဉ်းမြောင်းသောစတူဒီယိုတစ်ခုအထိ၊ လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် iPhone မှတဆင့်ကျွန်ုပ်ကူးယူနိုင်သည့် USB မိုက်ခရိုဖုန်းများအထိ…သူတို့အားလုံးကြိုးစားခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်အထိပြproblemနာသည်စတူဒီယို In-studio နှင့်ဝေးလံသော guests ည့်သည်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုပြသနာကထုတ်လုပ်သူတချို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရှေ့ပြေးပုံစံကိုတစ်ယောက်ယောက်ရနိုင်မလားဆိုတာကိုတောင်ကြည့်ခဲ့တယ်။
၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောပြproblemနာမဟုတ်သော်လည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် hardware အချို့လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်ဝေးလံသော guest ည့်သည်အပြင်အခြား guests ည့်သည်များစွာရှိပါက၎င်းသည်ဝေးလံသော guest ည့်သည်၏အချိန်ဆွဲထားခြင်းသည်သူတို့၏နားကြပ်တွင်သူတို့၏အသံကိုပဲ့တင်ထပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည်ထွက်ရှိလာသည့်အဝေးမှ guest ည့်သည်၏အသံကိုချန်လှပ်ထားသည့်ဘတ်စ်ကားကိုသင်ဖန်တီးရမည်။ ၎င်းကိုရောစပ် - အနုတ်ဟုလူသိများသည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်စက်ကိရိယာများအပြင်လမ်းပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်မာရောနှောထားသောစက်တစ်လုံးကိုသယ်ဆောင်။ မရပါ။ ထို့ကြောင့်တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ MacBook Pro တွင် virtual bus တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ အဲဒါဟာ setup လုပ်ဖို့အတွက်နာကျင်နေတုန်းပဲ။
အခုဆိုရင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေး podcasts တွေကိုဖန်တီးချင်တဲ့လူတိုင်းကဒီအားကောင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဤသည်သည်RØDEအတွက်ထူးခြားသောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်တိုင်း၏ podcasters များအတွက် All-in-one စတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူ Ablog Cinema သို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်အသစ်ကိုတွေ့ခဲ့လားဟုမေးခဲ့သည် RØDECaster Pro - Podcast ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို။ ဒီမှာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါ။
သို့သော်စောင့်ဆိုင်းပါ ဦး ။ ဒီနေရာမှာအသေးစိတ် rundown ပါ။
R everythingEE အရာရာတိုင်းကိုစဉ်းစားခဲ့သလား။ on-board features တွေပါဝင်သည်:
မိုက်ခရိုဖုန်းလိုင်း ၄ ခု: Class A၊ စတူဒီယို condenser မိုက်ခရိုဖုန်းများနှင့်သမားရိုးကျပြောင်းလဲနေသောမိုက်ခရိုဖုန်းများကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သော servo အခြေပြုသွင်းအားစုများ။
3.5mm TRRS အတွက်သီးခြားသွင်းအားစု (ဖုန်းသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်း), ဘလူးတုသ် (ဖုန်းသို့မဟုတ်ကိရိယာ) နှင့် ယူအက်​​စ်ဘီ (ဂီတ၊ အသံသို့မဟုတ်အက်ပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်)
ဖုန်းနှင့်အက်ပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ - ပဲ့တင်သံမရှိသော (ရောနှော - အနုတ်) ။ အလွှာများကိုအလွယ်တကူညှိနိုင်သည် - အပိုဂီယာသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသည့်တည်ဆောက်မှုမပါ ၀ င်ပါ။
Programmable အသံသက်ရောက်မှု padsပရိုဂရမ်တပ်နိုင်သော jingles နှင့်အသံအထူးပြုလုပ်ချက်များအတွက်အရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအသံဖမ်း ၈ ခု။
ဆော့ဗ်ဝဲမှတဆင့်RØDECaster™ Pro (သို့) သင်၏ကွန်ပျူတာမှပရိုဂရမ်မာသည်။
APHEX®စိတ်လှုပ်ရှား™ နှင့် Big Bottom ™ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်များတွင်သာတွေ့ရသောထိုကြွယ်ဝသောနွေးထွေးမှုအတွက်မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ယူခြင်း multistage dynamics လည်းပါဝင်သည်။ compression၊ limiting နှင့် noise-gating ။
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံများအတွက် equalizer ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအပါအဝင် setting အားလုံးကိုလွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
microSD ကဒ်သို့တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းများ လုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရန်သို့မဟုတ် USB မှတစ်ဆင့်သင်နှစ်သက်သောကွန်ပျူတာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုပါ။
ဤသည်အံ့သြဖွယ်၏တိုတောင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်၏ အသံသွင်းထားသည့်အသံချန်နယ်များရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နိဒါန်း၊ ပြင်ပနှင့်ကြော်ငြာများကိုပျံသန်းမှုတွင်ကြိုတင်ပရိုဂရမ်သွင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည် podcast hosting သို့စာသားကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
Live Video ကော။
ဒီယူနစ်ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက၎င်းကိုစနစ်တစ်ခုနဲ့တွဲဖက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် Switcher စတူဒီယို။ စတီရီယိုထုတ်လွှတ်မှုသည်သင်၏တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာတွင်အသံကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီး iPhone FaceTime သို့မဟုတ် Skype ခေါ်ဆိုမှုမှတစ်ဆင့် iPads နှင့်သင့် between ည့်သည်များအကြားအပြန်အလှန်ပြောင်းနိုင်သည်။
ငါနောက်ထပ်မှတ်တမ်းတင်ရန်လာမည့်နှစ်တွင်ခရီးစဉ်ရရှိပါသည် Dell နှင့်အတူ Luminary podcasts တွေကို... နှင့်ဤယူနစ်ငါနှင့်အတူသွားလိမ့်မည်။ အဆိုပါယူနစ်အလေးချိန်6ပေါင်ကျော်မှာအလေးချိန်ဒါကြောင့်ပတ်ပတ်လည် lug ဖို့အရမ်းဆိုးဖြစ်မသွားပါလိမ့်မယ်။ မိုက်ခရိုဖုန်းတွေ၊ ကေဘယ်ကြိုးတွေ၊ နားကြပ်တွေကိုထည့်ပါ၊ ငါဘီးနဲ့တစ်ခုခုဝယ်ဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တ ဦး တည်းတိုင်ကြားချက်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ယူနစ်သည်အတွေ့အကြုံများစွာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြား, ည့်သည်တစ် ဦး ပြောနေစဉ်တွင်aည့်သည်တစ်ယောက်ချောင်းဆိုးနေလျှင်သင်က၎င်းနှင့်အတူရှိနေသည်သို့မဟုတ်ပြပွဲကိုရပ်တန့်ပြီးအပိုင်းကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်၊ Постထုတ်လုပ်မှုတွင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ပါ။ အနာဂတ်ဗားရှင်းများသည် multi-track recording ကို micro-SD ကဒ်နှင့် USB output များမှတဆင့် enable လုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြပါစို့။
Sweetwater တွင်ရှိသောRØDECaster Pro အတွက်စျေး ၀ ယ်ပါ
Tags: မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်podcast စတူဒီယိုနီသောRØDecasterယူအက်စ်ဘီusb c
အမေဇုံဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှု: AWS ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။